You searched for - Chelmo News Portal
Home›Search Results for ""
‘Business Proposal’ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ပျိုမေတို့ရဲ့အသည်းတွေကို ဖမ်းစားသွားခဲ့တဲ့ Kim Min Kyu ကတော့ နောက်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်နေပါပြီ၊။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ သူဟာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲနာမည်ကတော့ “High Priest Rembrary” ဖြစ်ပါတယ်။ Web Novel တစ်ခု‌ဖြစ်တဲ့ “Holy Idol” ကို ...
ယခုလအစောပိုင်းမှာပဲ Variety Program Of The Year ဆုကို ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့Home Alone (I Live alone) ရဲ့နောက်ကွယ်က ထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာ Hwang Ji နဲ့ Kim Jong Kook , Ji Hyun Woo , Noh ...
မကြာသေးခင်ကမှ အသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Jessi ရဲ့ ZOOM သီချင်းဟာဆိုရင်တော့ Youtube မှာကြည့်ရှူသူပေါင်း သန်း၅၀ ကျော်ကို ရရှိခဲ့ပြီးသူမရဲ့အောင်မြင်မှု စံချိန်နောက်ထပ်တစ်ခုကို မှတ်တိုင်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ၊ နောက်ပြီး Spoitify ရဲ့လစဉ် နားထောင်မှုအများဆုံးစာရင်းထဲမှာ ZOOM ဟာနားထောင်သူ ခုနှစ်သန်းကျော်ကို ရရှိထားတာတွေအတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ top 100 chart ...
Snow Drop မှာ ဂျစ်တီးဂျစ်ကန် ခပ်မိုက်မိုက်မြောက်ပိုင်းသားလေးအဖြစ် ကောင်မလေးတွေအသည်းကို ဖမ်းစားသွားပြီး Business Proposal ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့အတူ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို သိမ်းယူသွားတဲ့ကောင်ချောလေး Kim Min Kyu ကတော့ Single Magazine မှာ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့အတူ ပျိုမေလေးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကို သိမ်းပိုက်သွားပြန်ပါပြီနော်။ Summer အတွက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစတိုင်ဖြစ်တဲ့ ...
Girl Generation အဖွဲ့ဟာ ဒီနှစ် August လထဲမှာ comeback ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ Girl Generation အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲဦးထွက် album ဖြစ်တဲ့ ‘Into The New World’ ဟာ August 2008 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ 15 ...
SBS ဟာ drama အသစ်ဖြစ်တဲ့ “Why Her?” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင်လာမဲ့ Hwang In Yeop ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ပုံစံကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်ဒရာမာဇာတ်လမ်းအမျိုးစားဖြစ်ပြီး သွေးအေးပြီး အောင်မြင်မှုကို မက်မောတဲ့ရှေ့နေ Oh Soo Jae အဖြစ် Seo Hyun Jin က ...